Isiokwu ifịm, Coffee Isiokwu, ezumike sofa - Yezhi
na-eri nri tebụl
High-Quality New Design Modern Fabric eri nri oche
N'ogbe Comfort Pu Onye Ndú na-eri nri oche
N'ogbe Natural Eco-enyi na enyi Unique Design Lo ...
Yezhi bụ a n'ichepụta ụlọ ọrụ, na ijikọta imewe, mmepụta na-ere n'ime otu isi. Ya ahịa si n'ụwa nile, tumadi tinyere America, Australia, Britain, Italy na Canada. The oge a factory emi odude ke Mingzhu Industrial Park, Conghua district, Guangzhou na mkpuchi nke 40,000 ㎡ , ụlọ ebe 80,000 ㎡ . E nwere ngụkọta 300 ọrụ na-enwe kwa afọ na mmepụta nke 360,000pcs. Na ya na isi ụlọ ọrụ dị na Central nke Guangzhou.
The 25 China International Ngwá ụlọ Expo
Lounge Sofa Chair, Dinning oche, Dinning Isiokwu na oche Nịm, Dinning Room oche, Bar Stools Bar Chairs, Restaurant Chairs And Stools,